Umshini wokuwasha izitsha Bosch: ezisebenza imiyalelo nencazelo onobuhle ezithandwayo
Ukugeza izitsha ngesandla - umsebenzi kunzima kakhulu futhi eside, okuyinto ethatha isikhathi. Kodwa kungaba sisetshenziselwe izinto ezidingekayo nomusa ngokwengeziwe. Yingakho besifazane abaningi bathambekele ukuthenga ngokwakho umsizi, njengoba Umshini wokuwasha izitsha Bosch (imfundo manual nezingxenye ezengeziwe ezifakwe e ikhithi).
Thenga eliphezulu Umshini wokuwasha izitsha - Ukukhulula isimiso imisebenzi yasendlini. Ake ucabange ngemva kokudla kwakusihlwa, ungavele uphumule nomndeni wami, kunokuba bame amahora, rewashing izitsha ezingcolile. Ukuze izikhungo ezinkulu, ezifana canteens nezindawo zokudlela, Umshini wokuwasha izitsha Bosch (imiyalelo yokusebenzisa kufanele ufundwa bonke abasebenzi) - into yokuqala edingekayo. Abasunguli lokuphekiwe kungcono kakhulu ukubeka amayunithi amaningana, esikhundleni ukuwasha izitsha ukukhokhela ezintathu noma ezimbili Umshini wokuwasha izitsha. Yingakho abanikazi imigoqo kanye zokudlela ngifuna engcono lomkhiqizo uyakukusindisa amanzi kanye nogesi. Okungukuthi, umfuziselo enjalo zingatholakala ku Bosch brand umugqa.
Leli bhukwana liqukethe bonke kwemigomo ukusetshenziswa, izici jikelele (usayizi, umthamo), uhlobo Umshini wokuwasha izitsha kanye, yebo, zichazwe ngokuningiliziwe izindlela. Abakhiqizi ukuncoma ukuyifunda nje ngaphambi kokuthenga, ukuze bathole ithuba enenzuzo kakhulu.
Umshini wokuwasha izitsha Bosch SPV 58-M50 RU
Lokhu okufana Umshini wokuwasha izitsha njengoba Bosch SPV 58-M50 RU, bayindlala kakhulu kulezi zinsuku. Ubukhulu (81,5x55h44,8) avumele ukuba ngiyibeke ekhishini ikhaya zokuhlala kanye ukudla zomphakathi izikhungo. Esikhathini esidlule ngokuvamile efakwe ngesikhathi esifanayo izingcezu ezimbalwa.
Inzuzo kungenziwa ngokuthi amandla imodeli. Eziyishumi amasethi tableware sibekwa omunye umjikelezo ukusebenza kwe-umshini efana Umshini wokuwasha izitsha Bosch.
Imiyalelo SPV imodeli 58-M50 RU iqukethe ulwazi olulandelayo.
Amanzi ukusetshenziswa - ayisishiyagalolunye amalitha.
Izici Zabantu izindlu, ikakhulukazi, uhlobo isivikelo ukuvuza.
Uhlelo Special "ukuvikelwa kwezingane". Lokhu umsebenzi akuvumeli ingane ukuvula imoto ngesikhathi, nxa inqubo yomsebenzi. Ngakho-ke kungenzeka ukugwema izinkinga ezifana izitsha ephukile ukulimala.
Imibiko Evelele Yonyaka Bosch Umshini wokuwasha izitsha
Umshini wokuwasha izitsha ezakhiwe, ukuvumela ukuze usethe ekhishini. Ngaphambili iphaneli has a ukubonisa, timer kanye inzwa, ebheka ubumsulwa amanzi. Asetshenziswa kanjani - idingidwa e imiyalelo. Lezi ongakhetha ukuba ulawule inqubo kanye nekhwalithi ukuwasha izitsha. Futhi in the manual kubonisa ukuthi kule yunithi ifakwe inkomba ezwakalayo ukuthi lixwayisa ngokuphela kwalesi lomjikelezo yokusebenza. Lena ngempela elula, njengoba asikho isidingo sihlale njalo siqaphele inqubo yokugeza izitsha. Umkhiqizi ukuthi sagxila induduzo esiphezulu umsebenzisi, lapho yokukhiqiza a Umshini wokuwasha izitsha Bosch.
Imiyalelo, okuyinto okufanele ibe khona, liqukethe ulwazi mayelana imishini yaleli su. ngokukhethekile kufanele kube kakhulu iphele izitsha. Ukusula izitsha - kweseshini eside kakhulu, isikhathi eside okungenani izikhathi ezimbili kuka ngesigezo uqobo ngqo. Abantu abaningi indiva ke, ikakhulukazi uma kukhona isikhathi esincane. izinto Wet kungaba yimbangela isikhunta nangesikhunta uma lilondolozwe amakhabethe lokhuni. ingress Daily yamanzi phezu lokhuni kubangela ukusonteka zabo futhi nabo amanzi phezu yensimbi - kuholela ukugqwala. Okungenhla nokwesula izitsha kwelinye Shintshela ngokuwa balahle zonke lezi zinkinga. Kufanele ngibalule ukuthi ingaphakathi umshini is ezenziwe ngensimbi engagqwali. Lokhu kunezela nempilo ende kuso.
Nezenzakalo ezilungele kithi emotweni?
Ikhwalithi abadumile isiJalimane, sizokunikeza ibhizinisi, igama Bosch. Umshini wokuwasha izitsha esakhelwe ethile, imodeli SPV 58-M50 RU, kuyoba yokufuna kakhulu ezindlini ezincane nezindawo zokudlela ezinkulu noma ezinye izikhungo lapho ukuwasha izitsha - inqubo amandla futhi kudingekile. Ukuze enze lezi manipulations emotweni has emathileyi ezintathu. Leli bhukwana icacisa iyiphi nenjongo yawo.
Ithreyi lokuqala - I-nezinkezo, izimfoloko nensimbi izinto.
Okwesibili - I-amapuleti kanye nezinkomishi.
Okwesithathu - I-glassware.
Zonke lezi okuzikhulula kukhona elula kakhulu:
Ihlala ku glassware eyayibaluleke ethambile;
phakathi - Ceramic (amapuleti, izinkomishi);
phansi - futhi steel kangaka okuthiwa abamnyama (izimbiza, amapani).
Njengoba enenhlabathi isidlo phezulu lincane phansi, eliphezulu kakhulu izinga ukugeza eyatholakala.
Generator kudivayisi - umshini DC
Quasar umusi wezindlu: izibuyekezo ushiye abathengi?
Umshini wokuwasha izitsha Bosch SPV 40E10RU - ukubuyekezwa. Bosch SPV 40E10Ru: ukubuyekeza, imicabango yabantu
Uyini soundbar futhi iyiphi ukukhetha? Izibuyekezo kanye nezincomo ikhasimende
Imfundo amakhono: esikoleni sokufundela, ekolishi, esikoleni sokufundela
Indlela ukukhetha Amathiphu esiqandisini
Indlela yokusebenzisa "Photoshop CS6": Wabasaqalayo. Plug-ins ngoba "Photoshop CS6"
Izindandatho Gymnastic kanye nokusetshenziswa yabo
Heater IR: Ukucaciswa. Indlela ukukhetha kwe-heater lefoni
Russian TV umethuli nomlingisikazi Alla Mikheeva
Indlela ukutshala ama-raspberry entwasahlobo? Ukukhethwa kwesiza zokutshala, betshala isikhathi